आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (११ आषाढ २०७६ बुधबार, २६ जुन २०१९)
घटना र विचार, न्युज डेस्क !5months ago June 25, 2019
श्री सूर्योत्तरायणे श्रीशाके १९४१ नेपाल सं. ११३९ वर्षा ऋतु वि.सं. २०७६ आषाढ ११ गते तद्अनुसार सन् २०१९ जुन २६ तारिख बुधबार आषाढ कृष्णपक्ष नवमी तिथि रेवती नक्षत्र शोभन योग तैतिल करण १३ः५८ पर वणि करण आनन्दादिमा उत्पात योग चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौमा सूर्योदय विहान ५ः११ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १९ः०१ मा हुनेछ । राहु काल –१२ः०६ देखि १३ः५१ दिशा शूल– उत्तर । दुर्व्यसनविरुद्धको दिवस ।
बृष राशि – अन्न धन बढ्नेछ । लेखन–प्रकाशन बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त होला । यात्रा हुनेछ । साथीभाइको साथ मिल्नेछ । आय वृद्धि होला । दैनिक कार्य राम्ररी चल्नेछ । उधारो लगाइएको पैसा उठ्ला । इच्छा पूरा होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । साझेदारीसित सम्बन्धित काम पनि बन्नेछ ।
मिथुन राशि – कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । मनोकुलको काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको साथ भेट्ला । यश बर्चश्वमा वृद्धि हुनेछ । धन यश मान महत्व बढ्ला ।
कर्कट राशि – शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागको कर्ममा रुचि बढ्ला । यात्रा होला । ख्याति फैलिनेछ । सुख सन्तति वृद्धि होला । प्रेममा सफलता पाउनुहुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने बढ्नेछ ।
सिंह राशि – कुनै प्रकारको जोखिममा नपर्नु शुभ रहला । लगानीको कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । ठूलो रकमको लगानी र महत्वपूर्ण कागजपत्र आदिमा हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । स्वास्थ्य र पाचनतन्त्रप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ ।
कन्या राशि – आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । सुख शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । यात्रापरक काम बन्ला । इष्टमितको साथ भेट्ला । आँट–उत्साह वृद्धि होला ।
धनु राशि – भागदौड रहला । खर्च बढेको लाग्ला । विवाद आदिमा नपर्नु उचित हुनेछ । नियम–कानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यप्रति ध्यान राख्नुहोला । लापर्वाही गरेमा भोली पछुतोमा पर्नुपर्नेछ । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नुपर्नेछ ।
मकर राशि – सुख समृद्धि धन यश मान महत्व बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । आयात निर्यातसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । इष्टमित्रको सहयोग भेटिनेछ । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी पनि उठ्नेछ । नियमित काममा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हनेछ ।
कुम्भ राशि – धन मान बढ्नेछ । सुख–आनन्द बढ्नेछ । सभासमारोहमा सम्मानित हुनुहुनेछ । गौरवमा वृद्धि होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जीत्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । मनोकुलको काम बन्नेछ । साहसिक काम बन्ला । हाकिमको साथ भेटला ।
मीन राशि – दिन शुभ र भाग्यवर्द्धक सावित हुनेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आरोग्यतामा बढोत्तरी होला । सुख शान्तिको अनुभूति हुनेछ । यात्रा होला । शुभ समाचार मिल्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । इष्टमित सुख सन्तति बढ्नेछ । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । सुख शान्ति आनन्द बढ्नेछ । मान सम्मान बढ्नुसंगै ख्याति फैलिनेछ ।